2012: Taonan’ny Fikomiana sy ny Fivoaran’ny Fiaraha-monina Any Amin’ny Firenena Mpiteny Frantsay – Fizarana Faharoa · Global Voices teny Malagasy
2012: Taonan'ny Fikomiana sy ny Fivoaran'ny Fiaraha-monina Any Amin'ny Firenena Mpiteny Frantsay – Fizarana Faharoa	Voadika ny 17 Janoary 2013 17:12 GMT
Zarao: Hotohizantsika asiana fizarana faharoa ny Tamberin'ny 2012 ho an'ny firenena mpiteny ampahany na manontolo ny teny frantsay. Raha nifototra tamin'ny fikomiana mitam-piadiana sy ny tetikasam-piaraha-monina mifandraika amin'ny krizy ara-toekarena ny fizarana voalohany tamin'ny tamberin'ny taona 2012 (izay hitanao ihany koa ato) [mg] , ny fizarana faharoa kosa miompana amin'ny fikomiana sivily manoloana olana amin'ny fomba fitantanana ao Togo, ao Tchad ary eto Madagasikara, eo ihany koa ny fandraisana an-tanana ataon'ny olo-pirenena ao Sénégal sy ao Cameroun mba hisian'ny mangarahara bebe kooa eo amin'ny raharaham-panjakana ary ny fivoaran'ny adihevitra momba ny fiaraha-monina ao Frantsa.
Fanoherana tao Togo, sy Tchad ary teto Madagasikara
Ao anatin'ny tetezamita politika indrindra i Togo taorian'ny fifidianana filoham-pirenena nampiady hevitra be tokoa tamin'ny 2005 ka nahateo amin'ny fitondrana an'i Faure Gnassingbé Eyadema, zanaky ny filoha teo aloha Gnassingbé Eyadema. Ahitana fikambanana mpiaro ny zon'olombelona maro sy antoko politika isan-karazany ao amin'ny ”Andao Vonjentsika i Togo” (CST). Tsikerain'ny CST, ankoatra ny zavatra hafa, ny fanaovana ho fitaovana ny andrim-panjakana sy ny fangoronan'olombitsy ny harem-pirenena efa tafalentika lalina ao amin'ny fahantrana ny mponina ao an-toerana. Nisy hatrany, nandritra ny taona, ny fifandonana mahery tamin'ny mpitandro ny filaminana isaky ny misy ny fihetsiketseha-panoherana ny fitondrana, araka ny hita amin'ny sary sy lahatsary manaraka:
Fanakanana ny Fihetsiektsehana tamin'ny 13 Jona 2012, avy amin'ny Collectif Sauvons le Togo hita ao amin'ny Flickr nahazoana alalana
Ahitana polisy mively mafy mpanao fihetsiketsehana iray ity lahatsary ity [Tandremo: sary mety hampihoron-koditra] :
Tao Tchad, nanao fitakiana mitovitovy amin'izany ny tamba-pikambanana mpiaro ny zon'olombelona eo amin'ny lafiny fiarovana ny fahalalahana hiteny sy ny fametrahana fanitsin-drafitra hisian'ny rariny ara-tsosialy bebe kokoa.
Teto Madagasikara, Nosakanana tamin'ny fomba mahery vaika ny fitakian'ny mpianatra sy ny mpampianatra noho ny tsy fandoavana vatsim-pianarana sy ny karama tamin'ny volana Mey [mg] sy tamin'ny volana Novambra [mg]. Tsy voafetra teo amin'ny mpianatra sy ny mpampianatra ihany ny fanoherana ny krizy ankehitriny; na ny mpiompy omby [mg] eny fa na ny banky aza dia manohitra ny tsy fandriampahelamana latsa-paka [mg] nanerana ny firenena.
“Vahao ny olana fa mijaly izahay” mpianatra mitokona eto Madagasikara avy amin'i Jentilisa (nahazoana alalana)
Tapitra ny fifidianana, nirehareha ny ao Sénégal, sahiran-tsaina ny ao Cameroun Sénégal:
Nisahotakotaka indrindra ny vanim-potoana talohan'ny fampielezan-kevitra tao Sénégal. Ny fankatoavana ny firotsahan'i A. Wade hanatontosa fe-potoam-piasana fahatelo [mg] nataon'ny Filan-kevitry ny Lalampanorenana no niteraka ny herisetra sy fanomanana fihetsiketsehana [mg] nomaninan'ny fanoherana senegaley. Nanome rariny ny mpanohitra [mg] ihany ny voka-pifidianana avy eo izay nametraka ho eo amin'ny fitondrana an'i Macky Sall tamin'ny 25 Marsa. Nisy fandraisana an-tanana nataon'olo-tsotra ho fanaraha-maso ny fifidianana no nahafahana nanamarina tao anatin'ny fotoana fohy ny valim-pifidianana ka isorohana ny fanoherana amin'ny voka-pifidianana. Indro ny lahatsarin'ny foiben'ny Sunu 2012 ny takarivan'ny fihodinana faharoa tamin'ny fifidianana filoham-pirenena:
Cameroun: (avy amin'i Julie Owono)
Ankoatra ny maha-firenena somary kirikiriana amin'ny olona pelaka, ny tena nampalaza an'i Cameroun nahatafidirany voaloham-pejy tamin'ny gazety tamin'ny taona 2012 nandritra ny lalao olaimpika tao London, dia ny nandosiran'ny atleta fito avy any aminy. Nanapa-kevitra ny hijanona tao amin'ny sisintany Britanika ry zareo fa tsy hody an-tanindrazana. Niezaka ny hahafantatra ny anton-tsafidin'ireo atleta ireo i Philippe Menkoué avy ato amin'ny Global Voices ka nanombana fa ny fiainana andavanandro sy ny asa mahamatihanina ny atlet any Cameroun [mg] no tena nahatonga ny fanapahan-kevitra:
Mampiharihary ny faharisarisan'ny tanora kameroney iray manontolo ireny fandosirana tokantrano ireny. Noho izany; araka ny tenin'ilay bilaogera kameroney Florian Nguimbis, tsy ireo atleta ireo no tezerana, fa tokony ho ny rafitra iray manontolo.
Tahaka ny namparikivy ny kameroney ny fifidianana nahavoafidy indray an'i P. Biya tamin'ny ampaham-bato mihoatra ny 75% ka toa manaiky ny zava-misy raha ny mety isian'ny fanitsiana hatramin'ny fakany ny rafitra ankehitriny no jerena.
Frantsa : Fiovam-pitondrana sa fahafaha-manova [fr: changement de pouvoir ou pouvoir de changement] ? (avy amin'i Suzanne Lehn) Afisim-pifidianana avy amin'i JC Benoist ao amin'ny Wikimedia CC License -3.0-BY
Ny fifidianana nahazoan'ny sosialista François Hollande manoloana ny filoha nitondra farany Nicolas Sarkozy tamin'ny fihodinana faharoa teo amin'ny fifidianana ho filoham-pirenena no zava-nisy nanamarika indrindra ny taona 2012, ary narahina sy nohamafisin'ny fifidianana solombavam-bahoaka. Narahi-maso akaiky avy any ivelany ny fizotry ny fifidianana ary nanjaka tokoa vazivazy ho entina manao ankamantatra ny mpandresy nialoha ny famoahana nahazoana alalana ny voka-pifidianana [mg].
Fa mbola mitoetra hatrany ny olana mifandraika amin'ny krizy ara-toekarena : ny fanilikilihana ny vahiny [mg], iraisana manerana an'i Eoropa, izay noezahan'ny governemanta vaovao nitondrana vahaolana ampahany tamin'ny alalan'ny fepetra fanamoràna ny fahazoana asa ho an'ny Roms sy hanalefahana ny politikam-pifindra-monina [mg] frantsay. Indrokelin'ny mpandrafitra na sehon'aretina tafapaka lalina ny olana nitranga nandritra ny Black Fashion Week [mg] tao Paris.
Hita tamin'ny adihevitra sy ny hetsika nifanaovan'ny mpiserasera ny lohahevitra miompana amin'ny fiaraha-monina : fanjakazakan-dehilahy [mg] eo amin'ny fiainana andavanandro, herisetra atao amin'ny vehivavy nambara nandritra ny fankalazana andro iraisampirenena iray, adi-hevitra mikasika ny fanafoanana na fandrindrana ny fivarota-tena [mg] , ny fisotroan-toaka eo am-panamoriana fiara.
Fampanantenan'ny kandidà Hollande izay hotontosaina tsy ho ela saingy tsy maintsy tratran'ny fahasahiranana amin'ny famadihana azy ho lalàna ny mariazy oniversaly na ny mariazy ho an'ny rehetra izay niteraka fidinana an-dalambe eo amin'ny mankasitraka sy ny mpanohitra izany ary voahetsiketsiky ny fankahalàna pelaka [mg].
Ny fiarovana ny fitenim-paritra sy vakim-paritra, iza nandal ny fankatoavan'ny Dina ho fiarovana ny fitenim-paritra avy amin'ny Filan-kevitr'i Eoropa, dia nampahatsiahivina [mg] tamin'ny 31 marsa.
Farany, dia efa niresaka fivoarana mahafinaritra eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena izahay : Nisy tolo-tanana niraisan'i [mg] Frantsa sy ny Banky Mondialy natao hampitsaharana ny “fitrandrahana tafahoatra ny otrikarena Afrikana” , sy ny nanatontosana tao Strasbourg, tamin'ny oktobra 2012, nomanin'ny Filan-kevitr'i Eoropa, ny Forum Mondialy momba ny Demokrasia voalohany. Tadidiontsika ihany koa fa tamin'ny faran'ny volana febroary, noho ny fihetsiketsehana nikirizana ho fanoherana ny Fifanarahana ara-barotra manenjika ny Hala-tahaka izay mahatratra ny zon'ny mpanoratra amin'ny votoaty an'aterineto, dia nanemotra ny fankatoavana izany ny Parlemanta eoropeana, nandritra ny fivoriana tao Strasbourg.
Hofehezina ity tamberina ity amin'ny alalan'ny ‘kokòn'akoholahy maraina’ , tamin'ny fahazoana Oscars 5 miavaka azon'ny sarimihetsika frantsay – izay tsy hita amin'ny anarany – “The Artist”, izay fahatsiarovana ny sinema tsy miteny, izay i Frantsa no nitari-dalana tamin'izany.
Nandray anjara tamin'ny fandrafetana ity lahatsoratra ity i Anna Gueye, Julie Owono, Abdoulaye Bah, Suzanne Lehn ary i Philippe Menkoue.
Tantaran'ny Eoropa Andrefana farany 1 andro izayAfrika Avaratra sy Afovoany AtsinananaNy “Alice Any An-tanin'ny Fahagagana” Araka Ny isainan'ilay Libaney-Frantsay Mpitsoka Trompetra Azy Rehefa Atao Gadona Hip-Hop Opera
2 andro izayGresyMiray Hina Isan'Andro Ny Olona Mba Hanampy Ireo Mpitsoa-ponenana Ao Gresy
Afrika MaintyEoropa AndrefanaFrantsaKameronaMadagasikaraSenegalTogo
FampandrosoanaFifidiananaFitenyFoko sy FiavianaHafanàm-po an-tseraseraHehyLalànaMediam-bahoakaPolitikaSarimihetsikaSiansaVehivavy sy Miralenta